Ogaden News Agency (ONA) – Cadawga oo baabuur lagaga gubay Sagalada dagaaladii ugu dambeeyay
Cadawga oo baabuur lagaga gubay Sagalada dagaaladii ugu dambeeyay
Posted by ONA Admin	/ April 25, 2012
CWXO ayaa weerar ay cadawga ku qaadeen ku gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo siugu jira naf iyo maal. Weerada ay CWXO ku qaadaan cadawga ayaa isugu jira dhabagal iyo habab kala duwan oo ka mid ah dagaal galinta naftood-hurayaasha.
Ciidanka jabhadda oo si dardar ah u waday hawlagadii uu ku qaadayay cadawga bilihii March iyo April ayaa waxay ka soo hooyiyeen guulo waawayn.
Dhianaca kale cadawga ayaa laga dareemayaa inuu u muuqdao mid sii daciifay moral ahaan iyadoo la arkayo khilaaf xoogan oo ka dhex muuqda ciidamada cadawga.
Dagaaladii aan helnay warbixintooda oo maalmihii ugu danbeeyay ay qaadeen CWXO ayaa waxay kala dhaceen sidan;
23/4/12 dagaal kamiin ah oo loo galay kolanyo gaadiid ah oo maraysay meesha loo yawaan Sagalada oo ka tirsan degmada qabri-bayax waxaa halkaa cadawga lagaga gubay hal baabuur iyo dhamaan ciidankii saaraa.
21/4/12 Dhabilay oo ka tirsan deegaanka Galaalshe dagaal ka dhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay. Isla maalintaa galinkii danbe dagaal ka dhacay meesha loo yaqaan god-libaax oo ka tirsan galaalshe ayaa cadawga waxaa ka soo gaadhay khasaare aan laga hayn wax faahfaahin ah
22/4/12 dagaal ka dhacay caleemalay oo ka tirsan degaanka bambaas waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana looga dhaawacay 2 kale
Dagaaladan ayaa waxay daba socdaan hawlgaladii ay CWXO ku burburinayeen ciidanka cadawga ee ku sugan dalka Ogaadeenya.